Zaambiyaan sababa miidhaa Sanyummaan tapha kubba miilaa Afrikaa Kibbaa waliin taasistu haqxe – Fana Broadcasting Corporate
Zaambiyaan sababa miidhaa Sanyummaan tapha kubba miilaa Afrikaa Kibbaa waliin taasistu haqxe
Finfinnee, Hagayya 29,2011 (FBC) – Federeeshiniin kubbaa miilaa Zaambiyaa Sanbata dhufu kana gita isa Afrikaa Kibbaa waliin tapha michummaa gaggeesuuf kan turte sababa miidha sanyummaa biyyatitti ga’a jiruun haqxeetti.
Taphichi haqamuun lammiilee Zaambiyaa fi biyyoota Afrikaan kanneen irratti sababa miidhaa sanyummaa Afrikaa kibbaatti irra ga’aa jiruu fi miidhaa kana mootummaa dhaabsiisuuf callinsa inni agarsiise ta’u ibsameera.
Mootummaan Zaambiyaa hanga haalli nageenyaa tasgabba’utti konkolaachistoonni konkolaataa gurguddoo oofaan gara Afrikaa Kibbaa akka hin imalle akeekkachiisaniiru.
Weellisaa beekkamaan Naayjeeriyaa Buuraan Booy sababa miidhaa sanyuummaan gonkumaa gara Afrikaa Kibbaa imaalu akka hin barbanne himeera.
Naayjeeriyaan miidhaa lammiilee ishee Afrikaa kibbaa jiran irra ga’aa jiru mootummaan Afrikaa Kibbaa akka dhaabu akeekkachiisteetti.
Dura taa’aan Koomiishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii Mahaammat, Afrikaa Kibbaatti rakkoo lammiilee biyyoota biroorra ga’aa jiru balaaleffataniiru.
Maddi:- BBC fi Afrika News